Alahady 02 Aogositra 2020. – FJKM
ASAN’NY APOSTOLY 20.17-24
Atao hoe : lahateny fanaovam-beloma nataon’i Paoly tamin’ireo loholon’ny Fiangonana naoriny ny ASA 20.18-35 . Nolazainy fa mila itoriana ny Filazantsara koa ny toerana hafa . Koa naneho izy eto fa ny toe-panahy nentiny nanompo ny Tompo dia :
Tamin’ny fanetrentena sy ranomaso
Ambaran’i Paoly tamin’ireto loholona ireto fa tsy nanao kitoatoa ny asa fanompoany velively izy ary vavolombelon’izany ireto olona niresahany ireto . Tena feno fanetretena mihitsy izy tamin’izany , ka na dia nampitomany tokoa aza ny nanjo azy noho ny nataon’ny Jiosy tamin’ny fanembatsembanana azy tsy hahavitany ny fanompoany .
2-Tamin’ny fitoriana sy fampianarana izay mahasoa
Nitory ny Filazantsara sy nampianatra ny kristiana izy tamin’izany ka nikendry indrindra izay mahasoa ny olona fa tsy nisy eritreritra handany andro fotsiny akory na nanao izay handrebirebena olona koa . Zava- misy eo amin’ny fitoriana sy fampianarana ny Filazantsata mantsy izany : misy mody mitoritory sy mampianatranatra eo fotsiny nefa zavatra hafa no tanjony . I Paoly kosa dia nitompo teny fantatra fa tsy nanao toy izany raha nitory sy nampianatra ny Fiangonana .
3-Tamin’ny fahafoizan-tena tanteraka
Ny tanjony amin’ny asa fanompoany dia ny hahatanteraka ny fitoriana ny Filazantsara , ka na inona na inona hahatanteraka izany dia vonona izy , na hatramin’ny ainy aza. Izany no nanomezana azy anarana hoe : Misionera lehibe indrindra eo amin’ ny tantara.
Ahoana izany manao fanompoana marina ho an’ny Tompo izany ?